Semalt: Ny fomba tsara indrindra hanakanana dokambarotra pop-up
Google dia manao asa goavana amin'ny fitazonana ireo varavarankely pop-up ao ambany. Izany no antony mahatonga ireo sehatry ny pop-up windows hanodina ny traikefa niainantsika dia maneho ireo olana lehibe sasany. Soa ihany fa maro ny fomba hiatrehana ireo dokam-barotra mahasorena sy mahasorena. Ny famoahana ireo sary tsy mila sy mahatsikaiky sy ny adiresy faneva dia fomba fanao roa. Voalohany, tsy maintsy esorinao ny adware na malware amin'ny solosainao. Faharoa, tokony hampiasa ny tranokala fampiroboroboana ianao hanakanana ny dokam-barotra pop-ups sy banner. Misy zavatra hafa tokony hotadidinao ao ambany.
Manadio ny varavarankelinao:
Nanazava i Lisa Mitchell, manam-pahaizana semalt , fa raha toa ianao ka mihazakazaka ny programa AVG ary efa niato tsy niasa tsara, dia tokony hikaroka fitaovana hafa an-tserasera na fitaovana maloto ianao. Ny ankamaroan'ireo manam-pahaizana dia manoro ny Malwarebytes Anti-Malware, izay tsara amin'ny ady amin'ny malware ary manala ireo dokam-barotra pop-up ao amin'ny rafitrao. Programa hafa mitovy amin'ny azonao atao ny Windows 7 sy Windows 8 dia ny AdwCleaner Xplode, izay mikendry ireo baikon'ny fitaovana, ireo mpanafika amin'ny navigateur, ary ny adware izay mamorona pop-ups amin'ny ankabeazany. Misy ny adwCleaner version diso sy tsy ara-dalàna izay hangataka anao handoa zavatra ho an'ny fanesorana ireo pop-ups sy adware. Tsy tokony hifidy izany ianao ary tsy hivoaka afa-tsy ny tena version an'ity fitaovana ity..
Mba hijerena ny fanitarana sy ny fanampim-panazavana ao amin'ny Windows 7 sy Windows 8 dia tokony tsindrio ny sary eo amin'ny sisiny ambony ary tsindrio ny safidy Add-ons ao amin'ny menu-drop-down. Ny fanampim-bokatra rehetra dia manana bokotra manokana ho an'ny faritra fanesorana, fanesorana ary fisafidianana. Tsy maintsy kitika fotsiny amin'ny bokotra Disable ianao ary atsaharo ny malware sy ny dokam-barotra pop-up ao amin'ny rafitra miasa. Ny fomba hafa hampihenana ny isan'ny dokambarotra pop-up ao Windows 7 sy Windows 8 dia amin'ny fametrahana rindrambaiko Ublock Origin. Ny fandaharan-draharaha dia natolotr'i Raymond Hill ary afaka mandany ireo malware sy adware samihafa izay mitondra pop-ups. Tonga miaraka amin'ny filalaovana vitsivitsy toy ny EasyPrivacy sy EasyList. Azonao atao ihany koa ny misafidy ny Ghostery, izay fitaovana tsara indrindra sy mahavariana indrindra hanakanana dokam-barotra pop-up. Afaka manakana ny dokambarotra Facebook, ny adiresy DoubleClick, ary ny dokambarotra Google Translate ihany koa.
Atsaharo ny foitra:
Pop-ups mora manafika tranokala sy rafitra miasa izay ampiasainao hampiroboroboana vokatra maromaro anaty aterineto sy hahazoana vola. Antsoina hoe foistware izany, izay ahitana sehatra toy ny Google, Microsoft Bing, Ask, PUPs ary Google Chrome. Ny vahaolana tsotra dia ny fametrahana programa fantatra amin'ny anarana hoe tsy fetezana. Manakona na manafoana ireo sombin-tolotra izay maneho ara-drariny ary miseho amin'ny endriky ny pop-ups.
Atsaharo ny fanavaozana Windows 10:
Microsoft dia manandrana manamboatra ny rafitra fiara vaovao Windows 10 ho an'ny fitaovana maro ary hametraka fitaovana kely GWX kely (Get Windows 10) ao Windows 7 sy Windows 8. Mamporisika anao hanavao maimaim-poana izay tsy tokony hatao. Manoro anao ny GWX Control Panel an'ny Ultimate Outsider raha te hanakana ny fampandrenesana fampahafantarana an'i Microsoft ianao sy ny fanimbana pop-ups. Azonao atao ihany koa ny manandrana ny fanakanana adiresy Ed Bott ary manaisotra ireo dokam-barotra sy ny fanentanana an-tserasera izay mamorona adala ho anao amin'ny aterineto Source .